एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्ताे अपत्यारिलो फाईदाहरु ! एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला – Online Khabar 24
एजेन्सी । लसुन हामीले भान्सामा दैनिक प्रयोग चिज हो ।
यसलाई हामी तरकारी र दालमा बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछौं । लसुन हाम्रो खानाको स्वाद बढाउन मात्र नभई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुनेगर्छ ।
लसुनलाई प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईछ।
लसुन हाम्रो शरिरको लागि अति उपयोगी मानिछ । तपाइलाई लसुनको बैज्ञानिक आधारमा के कस्ता फाईदा छन् यसका बारे जानकारी दिंदैछौ । हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । एक पोटि लसुन ३० मिनेटसम्म मुखमा राख्दा हुने फाइदा यस्ता छन्:-
Prevभाग्यमानीले मात्र देख्छन् यस्तो ५ सपना ! तपाँइले देख्नुभयको छ ?
nextआकाशमा अचानक आयो एलियनको उडन तश्तरी, उडिरहेको विमानको पिछा गर्न थाल्यो !